Casharrada Photoshop: Dhagaxa Qoraalka Qaybta II | Abuurista khadka tooska ah
Tallaabada xigta waxay noqon doontaa in la sameeyo lakab cusub oo la doorto aaladda ku caday midabka hore ee cawlan (Waxaan isku dayi karnaa noocyo kala geddisan illaa aan ka dooranno midka innagu habboon iyo midka ku habboon sawirkeenna). Waxaan ku rinjiyeyn doonnaa Tom wajigiisa, waxa xiisaha noo ah ayaa ah inaan ka shaqeyno aaggaas maxaa yeelay weli waxaa jira farqi la taaban karo oo u dhexeeya buska iyo wejiga. Waxaan dooran doonaa a qaabka isugeynta daboolka Caddee waanan wax ka badali doonaa Furfurnaan ilaa aad ku qanacdo, kiiskan waxaan ku siin doonaa a 20% madmadow.
Marka tan la sameeyo, waxaan ku dhammaystiri doonnaa qoraalkeenna dhammaan qaybahaas oo u muuqda kuwo aan macquul ahayn sida sunnayaasha ama meelahaas oo leh kala-duwanaansho xad-dhaaf ah. Waxaan ku samayn doonaa iyaga oo u maraya aaladda Soo bandhigid xad dhaaf ah waxaanan bilaabaynaa inaanu dib u eegno dhamaan meelaha aan ku aragno mugdi iyo ka shaqeynta kala duwanaanta hooska. Waxa na xiiseynaya ayaa ah inaan abuurno isku dheelitirnaan, isku mid ahaansho dhammaan dhinacyada muuqaalka. Hadafkeenu wuxuu noqon doonaa in la xado dhammaan nuucyada caadiga ah ee sawir sawir leh si qaabka farshaxanku u noqdo mid macquul ah.
Natiijadu si tartiib tartiib ah ayey isu beddeleysaa oo u midoobaysaa, laakiin kuma filna. Hadda waxaan abuuri doonnaa a lakabka cusub, waxa na daneynaya ayaa ah in la abuuro midnimo ka weyn guud ahaan. Markan lakabka oo dhan ayaannu khadhigaynaa, waxaan aadi doonnaa aaladda dheriga rinjiga oo waxaan dooran doonaa midab cirro leh (sida aan ujeclaanno) oo waxaan ku dhajin doonnaa lakabka oo dhan. Lakabkaan waa inuu ka sarreeyaa dhammaan dadka kale maxaa yeelay waxaan dooneynaa inay saameyn ku yeelato lakabyada kale. Waxaan dooran doonaa a qaabka isugeynta de Color maxaa yeelay waxa na xiiseynaya ayaa si sax ah uga shaqeynaya aaggaas, midabka sawirka. The Furfurnaan waxaan u yareyn doonaa a 50% (In kasta oo aad hore u ogayd in qiimahani isbeddel ku xidhan yahay mashruuceenna). Laakiin sida aad u aragto, saameyntani kaliya ma saameynayso farshaxankeena, waxay sidoo kale saameyneysaa asalkiisa tanina nama xiiseyneyso. Si loo yareeyo baaxadda ficilkeeda si ay u dhacdo buska, waxaan sameyn doonaa xulashada silhouette (waxaan aadi doonnaa lakabka sawirka oo riixeynaa yaryarihiisa isla waqtiga aan ku riixeyno) waxaana aadeynaa lakabka in aan cawlanay si aan u abuurno a maaskaro lakabka. Saamaynta waxay hadda kaliya saameyn ku yeelan doontaa farshaxankeenna.
Cunsur kale oo lagu xisaabtamo marka laga shaqeynayo farshaxan waa muuqaalka. Indhaha waa inay ahaadaan kuwo macquul ah sida ugu macquulsan, taas oo aan ku qasban nahay inaan soo afjarno dhalaalka, waa inaan ka takhalusnaa dhammaan waxyaalaha uu sawirkani ina siinayo. Tan waxaan ku dooran doonaa isha, maahan inay ahaato qaab sax ah, waxa muhiimka ah ayaa ah in xulashadan gudaheeda ay ku taal sagxadda. Kadib waxaan riixi doonnaa a Ctrl + J oo waxaan ku soo laba jibaari doonaa xulitaankan lakab cusub. Waan tagi doonaa Sawir> Iftiin iyo isbarbar dhig oo waxaan ku ciyaari doonnaa halbeegyada illaa irisku yeelanayo midab iyo isbarbardhig sida ugu macquulsan maqaarka wejiga.
Marka tan la sameeyo waxaan ku abuuri doonaa maaskaro daaha ah ishaas oo waxaan bilaabi doonnaa inaan ka takhalusno meelaha aan na xiisaynaynin burush midabka hore ee madow Waxaa lagugula talinayaa inaan ku celino howshan haddii loo baahdo oo aan nuqul ka dhigno lakabkan si aan ugu ciyaarno madmadowga. Waxay kaloo noqon doontaa lama huraan taas aan iska baabi'inno ardayga iyo dhalaalka maaddaama cunsurradan ay runta ka jaraan curteenna. Waxaan aadi doonnaa aaladda Xariif oo xulashada dusha sare ee iris-ka ayaan isku darsaneynaa iyadoo ka dhigeysa dhalaalka inuu baaba'o. Si loola shaqeeyo isha ka soo horjeedka waxaan raaci doonnaa isla nidaamka.
Tallaabada xigta waa in la abuuro waji-hagaajinta (Xusuusnow inaad ku darto maaskarada hagaajinta waa inaad doorataa badhanka ku hoos yaal lakabyada u ekaanta bilaha) si aad uga wada shaqeyso guud ahaan. Waxaan isticmaali doonaa laba lakab oo isku hagaajin ah. Taasi oo ah Tone iyo saturation (Tan waxaan uga shaqeyn doonaa inta badan nalalka iyo dabcan dhererka), waxaan la ciyaari doonnaa halbeegyada illaa aan ka helayno natiijada ugu habboon fikraddeenna. Lakabka labaad ee hagaajinta ee aan ku dari doono wuxuu noqon doonaa Iftiin iyo isbarbar dhig waxaana sidoo kale raadin doonaa xalka ugu guusha badan.
Tallaabada xigta waa ikhtiyaari, runti waan ka reebay si aan u gaadho natiijada kama dambaysta ah. Waxay ku saabsan tahay inaad ku darto maaddada marmar. Waxaan heli karnaa xoogaa ah waxyaabaha la doonayo. Waan soo dejin doonnaa tan oo waan beddeli doonnaa oo waxaan dhigi doonaa meesha saxda ah. Iyada oo qaab isku dhafan oo daaran ku dhufo iyo a daahfurnaan del 70%. Tallaabada xigta waxay noqon doontaa inaan xusho silhouette-ka sawirkeenna mar labaad oo aan ku abuurno maaskaro lakab ah lakabka qaabkeenna. Ugu dambeyntii waxaan soo dejineynaa sanduuqayaga. Xaaladdan oo kale, waxaan isticmaali doonaa asalka ka muuqday bishka Menander, waxaan soo dejin doonaa sawirkii asalka ahaa oo waxaan hoos dhigi doonaa dhammaan lakabyada kale.
Hagaag, halkan waxaan ku haynaa qoraalkeena dhagaxa si fudud oo fudud oo macquul ah. Si fudud, sax?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Tababarka Photoshop: Dhageysiga Qoraalka Qaybta II
Mega Pack ee kheyraadka loogu talagalay Adobe Photoshop Bilaash